Willem Dafoe – Stars – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
The Lighthouse (2019) Unicode ဒီဇာတျကားလေးထဲမှာတော့ နာမညျကွီးသရုပျဆောငျဖွဈတဲ့ ရောဘတျပတျတီဆနျ (Twilight ထဲကမငျးသား) နဲ့ မငျးသားကွီး ဝီလီယံဒတျဖို (Spiderman 2002 ထဲဗီလိနျမငျးသားကွီး) နှဈယောကျတညျးသာလြှငျ တဈကားလုံးမှာ သရုပျဆောငျထားတာတှရေ့မှာပါ မငျသားနှဈယောကျတညျးနဲ့တငျ တဈကားလုံးကိုတဖွညျးဖွညျးနဲ့ဆှဲဆောငျထားတာပါ ဒီဇာတျကားကိုကွညျ့ပွီးရငျတော့ ခေါငျးထဲမှာအတှေးတှတေဈသီခညျြးကနျြခဲ့စမေယျ့ဇာတျကားမြိုးပါ ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ ၁၉ရာစု New England ကမျးရိုးတနျးကမီးပွတိုကျတဈခုမှာအခွတေညျရိုကျထားပါတယျ အီဖရနျဝငျးစလို လူငယျလေးတဈယောကျဟာသောမတျဈဝိတျဒျ ဆိုတဲ့ မီးပွတိုကျစောငျ့ရှောကျသူအဖိုးကွီးရဲ့လကျအောကျမှာ လေးပတျလောကျအလုပျလုပျဖို့တာဝနျကလြာပါတယျ စစရောကျခငျြးနမှောပဲ သူ့အိပျရာထဲကနေ ရသေူမအရုပျလေးတဈရုပျကိုတှခေဲ့ပွီးသိမျးထားခဲ့ပါတယျ အီဖရနျ သူတို့နထေိုငျတဲ့နရောအတှကျ အလုံးစုံအကုနျလုံးကိုလုပျရပါတယျ သောမတျဈဝိဒျကတော့ညဖကျ မီးပွတိုကျရဲ့ထိပျဆုံးအပျေါထပျမှာပဲအလုပျလုပျပါတယျ နဖေ့ကျတှအေလုပျလုပျပွီး ညဖကျဆိုအီဖရနျရဲ့အတှေးတှကေ ကယောကျခွောကျခွားဖွဈတယျ တှေးမိတှေးရာတှလြှေောကျတှေး ဖွဈတာမြားတယျ တဈနညေ့ဖကျ ညစာစားခဲ့တဲ့အခါ အီဖရနျဟာ လမျးညှနျစာအုပျမှာက အလုပျကိုအလှညျ့ကလြုပျရမယျလို့ရေးထားတယျအဲ့ဒါကွောငျ့သူလဲ မီးပွတိုကျအပျေါဆုံးမီးအိမျကွီးရှိတဲ့နရောမှာအလုပျလုပျခငျြတယျလို့ပွောပါတယျ ဒါပမေယျ့ သောမတျဈကလကျမခံပါဘူး သူတဈဦးတညျးသာလြှငျအဲ့အလုပျလုပျမယျဘယျသူမှလုပျလို့မရဘူးဆိုပွီးငွငျးခဲ့ပါတယျ အီဖရနျလညျး စီနီယာအထကျလူကွီးဖွဈနအေတှကျကွောငျ့ ပထမအကွိမျလကျလြှော့ခဲ့ပါတယျ ညစာစားနရေငျးနဲ့သောမတျဈကအီဖရနျကို ဒီနရောမှာရှိတဲ့အယူအဆတဈခြို့ကိုပွောပွခဲ့ပါတယျ ပငျလယျဇငျရျောငှကျတှကေိုမသတျရဘူး သတျရငျဒုက်ခရောကျမယျဆိုတာတှအေခွားအရာတှရေောပေါ့ဒီလိုနဲ့ သောကျရငျး စားရငျးနလောလိုကျတာ တဈနတေ့ော့ အီဖရနျတို့သောကျနတေဲ့ရကေနျထဲကိုဇငျရျောငှကျတဈကောငျကပြွီးသနေပေါတယျအီဖရနျဟာ ဒေါသထှကျပွီး ...
IMDB: 7.6/10 94769 votes
Once UponaTime in Mexico (2003) Unicode ဂဈတာအိတျကွီးလှယျထားတတျတဲ့ သှေးအေးလူသတျသမားတှအေကွောငျးကို မှတျမိကွဦးမယျထငျပါတယျ… မငျးသားကွီး Johnny Depp , Antonio Banderas တို့အပွငျ မငျးသမီးတှဖွေဈတဲ့ Salma Hayek နဲ့ Eva Mendes တို့လို နာမညျကြျောတှနေဲ့ရိုကျကူးထားတဲ့ ဒီဇာတျကားဟာ ဒါရိုကျတာ Robert Rodriguez ရဲ့ Mexico Trilogy ထဲကနောကျဆုံးဇာတျကားပါ။ သူ့ရှကေ့ ရိုကျကူးခဲ့တဲ့ El Mariachi (1992) နဲ့ Desperado (1995) ဆိုတဲ့ ဇာတျကားတှကေလဲ ဒါရိုကျတာ Robert Rodriguez ရဲ့ နာမညျကြျောဇာတျကားတှပေါ။ El Mariachi (1992) ဇာတျကားဆိုရငျ Budget $7000 သာအကုနျအကခြံခဲ့ပွီး Box Office မှာ $2 million ထိရရှိခဲ့လို့ “ဘတျဂကျြမရှိရငျ အောငျမွငျတဲ့အနုပညာကို မလုပျပွနိုငျဘူး” ဆိုတဲ့ လူစားတှကေို လကျညှိုးထိုး ဟားတိုကျပွနတေဲ့ ဇာတျကားတဈကားဖွဈခဲ့ပါတယျ။ (Mexico ...
IMDB: 6.4/10 149654 votes
Murder on the Orient Express (2017) Unicode စာရေးဆရာမ အဂါသာ ခရစ်စတီးရဲ့ ၁၉၃၄ တုနျးက နာမညျကြျောဝတ်ထုကို အခွခေံပွီး ဒါရိုကျတာကဲနကျဘရာနကျ က ရိုကျကူးထားတာပါ။ ၁၉၃၄ ဆောငျးရာသီကာလ မွငျကှငျးနဲ့အတူ နာမညျကြျော ဘယျလျဂြီယံစုံထောကျ ဟာဂြူလီပှိုငျရော့တျဟာ ဂရြေုဆလငျက ခိုးမှုတဈခုကို ဖျောထုတျပွီးနောကျ ခရီးသှားပွီးအပနျးဖွဖေို့ စီစဉျခဲ့ပါတယျ။အဲဒါနဲ့ အစ်စတနျဘူလျကို သှားခဲ့ပွီးOrient Express ရထားကုမ်ပဏီ ဒါရိုကျတာ သူ့မိတျဆှဘေော့နဲ့ တှဆေုံ့ခဲ့ပါတယျ။လနျဒနျကနေ သံကွိုးစာရတဲ့အတှကျ ပှိုငျရော့တျတဈ ယောကျဘော့စီစဉျပေးတဲ့ရထား ခရီးစဉျနဲ့ အရေးပျေါအိမျပွနျဖို့ ဖွဈခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီနောကျပှိုငျ ရော့တျကို ဆမျမွူရယျရကျခကျြ ဆိုတဲ့ အမရေိကနျသူဌေးတဈ ယောကျက သုံးရကျတာ ရထား ခရီးစဉျအတှငျးမှာ သကျတျော စောငျ့လုပျဖို့ကမျးလှမျးခဲ့ပါတယျ။အမညျမသိပါတီတဈခုရဲ့ အသကျအန်တရာယျခွိမျးခွောကျစာပို့ခံရတဲ့ အတှကျ ပှိုငျရော့တျကိုငှားတာ ဖွဈပမေယျ့ ပှိုငျရော့တျကလကျ မခံခဲ့ပါဘူး။နောကျတဈနေ့ မနကျမှာ တော့ မစ်စတာဆမျမွူရယျဟာ ဓားနဲ့အခကျြပေါငျးမြားစှာ အထိုး ခံရပွီး အသတျခံရတာကွောငျ့ ပှိုငျရော့တျဟာဘော့နဲ့အတူ စုံစမျးဖျောထုတျဖို့လုပျခဲ့ပါတယျ။ အခငျးဖွဈတဲ့နရောက သဲလှနျစတှေ၊ သကျသတှေရေဲ့ ...
IMDB: 6.5/10 171,753 votes
Motherless Brooklyn (2019) Unicode ဒီကားလေးကတော့ Imbd 6.9 ရရှိထားပွီးဂြှနျနသနျ ရဲ့ နာမညျကြျောဝတ်ထု ကိုအသကျသှငျးထားတာဖွဈပါတယျ ဇာတျလမျးကို ၁၉၅၀ ဝနျးကငျြကာလနယူးယောကျမှာ နောကျခံထားရိုကျကူးထားပါတယျ အာရုံကွောဆိုငျရာအားနညျးပွီးအဓိပ်ပါယျမဲ့ စကားတှကေို ထိနျးမရပဲပွောတတျတဲ့စုံထောကျ လိုငျရိုနယျက တဖကျမှာလညျးထကျမွကျပွီးဉာဏျကောငျးနပွေနျပါတယျ တနမှေ့ာ သူ့ရဲ့သူဌေးဖရနျ့မီနာ ကမွို့တျောဝနျ မိုးစကျရဲ့ ကိစ်စမှာဝငျရှုပျလို့ အသတျခံရပါတယျ အဲ့တာကိုမကနြေပျပွီးတော့လိုငျရိုနယျကသတငျးထောကျ အနနေဲ့ ဟနျဆောငျပွီးစုံစမျးဖျောထုတျခြိနျမှာတော့ အဲ့မွို့ကိုထိနျးခြုပျထားတဲ့အာဏာပိုငျတှရေဲ့ အရှုပျတျောပုံ တှလေို့ကျရတဲ့အခါမှာ အာဏာရူးတှရေဲ့ အကွောငျးကို ထဲထဲဝငျဝငျသိရှိသှားပွီးတော့ လူမညျးတှကေိုခှဲခွား ဆကျဆံတာတှေ လာဘျစားမှုတှေ ပါဝါပွမှုတှကေိုပါ ရှာဖှတှေရှေိ့သှားပွီး မွို့ရဲ့ အန်တရာယျ အရှိဆုံးသော သမိုငျးဝငျမဲ့အာဏာရှငျနဲ့ တညျ့တညျ့တိုးပါတော့တယျ ဂန်ထဝငျဆုရ စုံထောကျဇာတျကားကောငျးလေးမို့ ကွညျ့ရှုသငျ့ပါကွောငျး ………. Credit Review Zawgyi ဒီကားလေးကတော့ Imbd 6.9 ရရှိထားပြီးဂျွန်နသန် ရဲ့ နာမည်ကျော်ဝတ္ထု ကိုအသက်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ် ဇာတ်လမ်းကို ၁၉၅၀ ဝန်းကျင်ကာလနယူးယောက်မှာ နောက်ခံထားရိုက်ကူးထားပါတယ် အာရုံကြောဆိုင်ရာအားနည်းပြီးအဓိပ္ပါယ်မဲ့ စကားတွေကို ထိန်းမရပဲပြောတတ်တဲ့စုံထောက် လိုင်ရိုနယ်က တဖက်မှာလည်းထက်မြက်ပြီးဉာဏ်ကောင်းနေပြန်ပါတယ် တနေ့မှာ သူ့ရဲ့သူဌေးဖရန့်မီနာ ကမြို့တော်ဝန် မိုးစက်ရဲ့ ကိစ္စမှာဝင်ရှုပ်လို့ အသတ်ခံရပါတယ် အဲ့တာကိုမကျေနပ်ပြီးတော့လိုင်ရိုနယ်ကသတင်းထောက် အနေနဲ့ ဟန်ဆောင်ပြီးစုံစမ်းဖော်ထုတ်ချိန်မှာတော့ အဲ့မြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အာဏာပိုင်တွေရဲ့ အရှုပ်တော်ပုံ တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာ အာဏာရူးတွေရဲ့ အကြောင်းကို ထဲထဲဝင်ဝင်သိရှိသွားပြီးတော့ လူမည်းတွေကိုခွဲခြား ဆက်ဆံတာတွေ လာဘ်စားမှုတွေ ပါဝါပြမှုတွေကိုပါ ရှာဖွေတွေ့ရှိသွားပြီး မြို့ရဲ့ အန္တရာယ် အရှိဆုံးသော သမိုင်းဝင်မဲ့အာဏာရှင်နဲ့ တည့်တည့်တိုးပါတော့တယ် ဂန္ထဝင်ဆုရ စုံထောက်ဇာတ်ကားကောင်းလေးမို့ ကြည့်ရှုသင့်ပါကြောင်း ………. Credit Review
IMDB: 6.8/10 23338 votes
John Carter (2012) Unicode 2012 ခုနှဈ‌အတှကျ‌ လူကွိုကျ‌မြားခဲ့တဲ့ ရုပျ‌ရှငျ‌‌တှထေဲမှာ walt disney ကဖွနျ့‌ခညျြ‌ တဲ့ John Cater လညျးတကားအပါအဝငျ‌ပါပဲ .. fliming budeget 250 million ‌တောငျ‌ရှိခဲ့တဲ့ ဒီသိပ်ပံ စှနျ့‌စားခနျး ရုပျ‌ရှငျ‌ကားဟာ box office မှာ ဝငျ‌‌ငှနေညျးခဲ့‌ပမေယျ့‌ ကမ်ဘာတဈ‌ဝနျးမှာ‌တော့‌အောငျ‌မွငျ‌မှုရရှိခဲ့တယျ‌ဗြ ... battle ship .. savages .. Lone surviver ဇတျ‌ကား‌တှထေဲက မငျးသား taylor kitsch က အဓိကဇတျ‌‌ကောငျ‌ john carter ‌နရောကပါဝငျ‌သရုပျ‌‌ဆောငျ‌ထားတဲ့ ဒီကားဟာ effect ‌ကောငျး‌တှနေဲ့ စှနျးစားခနျးကား‌တှကေိုကွိုကျ‌တဲ့ ကြှနျ‌‌တျော‌တို့လို ရုပျ‌ရှငျ‌ကွိုကျ‌သူ‌တှရေဲ့ Likes ‌တှအေမြားကွီးရခဲ့တယျ‌ ... ဇတျ‌လမျးကို american cevil war captain John Cater ရဲ့ ရုတျ‌တရကျ‌‌သဆေုံးမှုနဲ့ဖှငျ့‌ထားတယျ‌ဗြ ... ဉီး‌လေးဖွဈ‌သူ‌သဆေုံးမှု‌ကွောငျ့‌ ...
IMDB: 6.6/10 244,408 votes
Spider-Man2(2004) အရင်မင်းသားဇာတ်ကားပါ ကျွန်တော်ကတော့ အရင်မင်းသားနဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကိုပိုသဘောကျမိပါတယ်..IMDb Rate လည်း 7.3 ရရှိထားပါတယ်..ဒီဇာတ်လမ်းမှာတော့ စမိုက်ဒါမန်းဟာ မပျော်မရွင်ဖြစ်နေရပါတယ်.သူချစ်ရတဲ့ကောင်မလေး မေရီဂျိန်းဝမ်ဆန်ကို စွန့်လွှတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ သူ့ဘ၀ကို ရာဇ၀တ်မှုတွေကိုတိုက်ဖျက်နေရင်းနဲ့ဖြတ်သန်းနေရပါတယ်..မေရီဂျိန်းဟာလည်း သူငှေးတစ်ယောက်နဲ့စေ့စပ်ထားလိုက်ပါပြီ …သူ့သူငယ်ချင်းဟယ်ရီကလည်း သူ့အဖေကိုသတ်သွားတဲ့စပိုက်ဒါမန်းကို ပြန်သတ်ချင်လို့အသည်းအသန်စုံစမ်းနေပါ သလို မြို့ကိုပေးမယ့် အန္တရာယ်အသစ်လည်းတိုးလာပါတယ်..ဒါတွေဘယ်လိုဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာဒေါင်းပြီးကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ Credit Review
Spider-Man (2002) ဒီကားကတော့ Spider-Man ကိုသိတဲ့သူတွေရော မသိတဲ့ သူတွေကိုပါ ပထမဆုံးအကြိမ် မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ တဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး Live Action Spider-Man ဇာတ်ကားက ပရိတ်သတ်ကို စိတ်ကြေနပ်မှုပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့် လူငယ် ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ Comic စာအုပ်ပရိတ်သတ်တွေ အားပေးမှုကိုရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီကားက သာမန်အထက်တန်းကျောင်းသား Peter Parker ဘ၀ကနေ ဆယ်ကျော်သက် စူပါဟီးရိုး ဖြစ်လာပုံနဲ့ ရရှိထားတဲ့ စွမ်းအားတွေကို အဓိပ္ပာယ်ရှိရှိ အသုံး ချဖို့ အတွက် တွန်းအားရလာပုံတွေကို အဓိက ရိုက်ကူးထားပါတယ်။Spider-Man ဖြစ်လာပုံကို အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ Oscorp ကုမ္ပဏီက Radioactive Spider အကိုက်ခံရပြီးနောက် စွမ်းအားတွေရလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Spider-Man ရဲ့အကြောင်း အနည်းငယ်ပြောပြချင်ပါတယ်။ Spider-Man ကို Marvel က ကာတွန်းဆရာ Stan Lee ကစတင်မိတ်ဆက် ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံးအကြိမ် ...
IMDB: 7.3/10 645,165 votes
Out of the Furnace (2013) Russel(Christian Bale)က စတီးစက်ရုံတခူမှ အလုပ်ကြမ်းသမားတယောက်ဖြစ်ပါ တယ်။ သူ့ဟာ ကြာရှည်မခံတော့တဲ့ ရောဂါသည် အဖေကြီးနဲ့ လောင်းကစားလိုက်စားတဲ့သူ့ညီRodney Baze(Casey Affleck)တို့ကို ရိုးရိုးသားသားလုပ်ကျွေးနေတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ Russel က Rodney အပေါ်အနွံတာခံချစ်တဲ့၊Rodney ဘာလုပ်လုပ် နားလည်ပေးတဲ့ အကိုဖခင်တစ်ဦးပါ။သူ့ညီ ရဲ့ မြင်းကြွေးတွေကိုလည်း ဒိုင်ခံဆပ်ပေးနေရှာသူဖြစ်ပါတယ်။တနေ့ကျတော့ သူမောင်းတဲ့ကားက ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပြီး သူက မူးယစ်သောက်စားထားတယ်ဆိုပြီး ထောင်ကျသွားပါတယ်။ဒါသူ့ရဲ့ဘ၀အလှည့်အပြောင်းလို့ဆိုရမှာပါ။ထောင်ကျပြီး နောက်ပိုင်းသူအရာရာကိုဆုံးရှုံးလာခဲ့ရပါတယ်။ ထောင်ကလွတ်လာတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့ နာတာရှည်ရောဂါသည် အဖေကြီးကလည်း မရှိရှာတော့ပါဘူး။နောက်ပြီး သူ့ရဲ့အရမ်းချစ်ရတဲ့ ချစ်သူကလည်း တခြားတယောက်နဲ့ သာယာတဲ့ဘ၀ကိုပိုင်ဆိုင်နေပါပြီ။ အခုတော့ သူ့မှာ သူ့ရဲ့ညီRodneyပဲကျန်ပါတော့တယ်။Rodneyက အီရတ်စစ်ပွဲကနေစစ်မှုထမ်းပြန်လာပြီး တရားမ၀င်Underground fight တွေနဲ့ ပိုက်ဆံရှာနေသူဖြစ်ပါတယ်။တနေ့Russel နဲ့Rodney. ၂ဦးသားစကားများရာကနေ Rodney တယောက်အရင်Fight လို့ရတဲ့ငွေထက်များစွာရမဲ့ နေရာကို သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနေရာကတော့ Degroat(woody Herralson) လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့နယ်မြေပါ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီနေရာကအပြန်မှာတော့ Rodney တယောက်Degroat လက်ချက်နဲ့အသက်ပျောက်ခဲ့ရပါတော့တယ်။ ...
Aquaman (2018) Unicode ပငျလယျရအေောကျက ပွညျထောငျစု Atlantis ရဲ့မငျးသမီး Atlanna ဟာမိဘတှေ စီစဉျတဲ့ အိမျထောငျဘကျကို သဘောမကတြာကွောငျ့ လူ့ပွညျကို ထှကျပွေးလာခဲ့တယျ ။ အဲ့ဒီမှာ မီးပွတိုကျအစောငျ့ Thomas Curry နဲ့တှပွေီ့းခဈြကြှမျးဝငျခဲ့တယျ ။ သူတို့နှဈယောကျဟာ Aquaman ဖွဈလာမယျ့ Arthur Curry ကို မှေးဖှားခဲ့တယျ ။ Arthur မှာ ရသေတ်တဝါတှနေဲ့ စိတျခငျြးဆကျသှယျနိုငျတဲ့ စှမျးရညျရှိတယျ ။တနမှေ့ာတော့ Atlantis စဈသညျတျောတှေ ရောကျလာပွီး Atlanna ကို အတငျးအကပျြ ပွနျချေါသှားခဲ့တယျ ။ မပွနျခငျမှာ Atlanna ဟာ သူ့လူယုံတျော Vulko ထံ သားဖွဈသူ Arthur ကို အပျနှံခဲ့ပွီး သူ့စှမျးရညျတှကေို လကေ့ငျြ့ပေးဖို့ အကူအညီ တောငျးခဲ့တယျ ။နှဈပေါငျးမြားစှာ ကွာတဲ့အခါ Atlanna ကှယျလှနျအပွီး သူ့ရဲ့ဒုတိယ သားဖွဈသူ Orm ဟာ Atlantis ရဲ့ဘုရငျဖွဈလာတယျ ...
Aquaman (2018) ပင်လယ်ရေအောက်က ပြည်ထောင်စု Atlantis ရဲ့မင်းသမီး Atlanna ဟာမိဘတွေ စီစဉ်တဲ့ အိမ်ထောင်ဘက်ကို သဘောမကျတာကြောင့် လူ့ပြည်ကို ထွက်ပြေးလာခဲ့တယ် ။ အဲ့ဒီမှာ မီးပြတိုက်အစောင့် Thomas Curry နဲ့တွေ့ပြီးချစ်ကျွမ်းဝင်ခဲ့တယ် ။ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ Aquaman ဖြစ်လာမယ့် Arthur Curry ကို မွေးဖွားခဲ့တယ် ။ Arthur မှာ ရေသတ္တဝါတွေနဲ့ စိတ်ချင်းဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်ရှိတယ် ။တနေ့မှာတော့ Atlantis စစ်သည်တော်တွေ ရောက်လာပြီး Atlanna ကို အတင်းအကျပ် ပြန်ခေါ်သွားခဲ့တယ် ။ မပြန်ခင်မှာ Atlanna ဟာ သူ့လူယုံတော် Vulko ထံ သားဖြစ်သူ Arthur ကို အပ်နှံခဲ့ပြီး သူ့စွမ်းရည်တွေကို လေ့ကျင့်ပေးဖို့ အကူအညီ တောင်းခဲ့တယ် ။နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာတဲ့အခါ Atlanna ကွယ်လွန်အပြီး သူ့ရဲ့ဒုတိယ သားဖြစ်သူ Orm ဟာ Atlantis ရဲ့ဘုရင်ဖြစ်လာတယ် ...
American Psycho (2000) အ​မေရိကန်​ ပြည်​​ထောင်​စု ၉ဝနှစ်​ဝန်းကျင်မှာ ကုမ္ပဏီ လူကြီးမင်း​တွေကြားက အချင်းချင်းပြိုင်​ဆိုင်​မှု​တွေ မနာလိုမှု​တွေ အဆင့်​အတန်းခွဲ ခြားမှု​တွေပြည့်​နှက်​​နေခဲ့တယ်​ ....ရယ်​​မောစကား​ပြော​နေ​ပေမယ့်​ အတွင်းစိတ်​က မုန်းတီး​နေကြတဲ့ ပတ်​ဝန်းကျင်​တစ်​ခု….. ဒီလိုအနေအထားမှာ ပက်​ထရစ်​ ဘိတ်​မန်း တစ်​​ယောက်​ သူကြည့်​မရတဲ့ လုပ်​​ဖော်​ကိုင်​ဘက်​ကို သတ်​ပစ်​ခဲ့တယ်​ ...သူ့လုပ်ရပ်တွေက အကုန်အဆန်းတွေကြီးပဲ…ဒီကားဟာ TOP IMDB ထဲမှာပါသလို ရုပ်ရှင်ဝေဖန်ရေးသမားတွေအသိအမှတ်ပြုဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်တယ်….ဒီကားကိုကြည့်တဲ့သူတွေအဖို့ ဘိတ်မန်းရဲ့ စရိုက် အမူအကျင့်တွေ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဆက်ဆံပုံတွေ အသေးစိတ် မျက်ခြေမပြတ်လိုက်ရပါ့မယ်..….သူလုပ်ရပ်တွေဟာ အမှန်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာလား…စိတ်ကူးယဉ်သက်သက်လား….သူစီစဉ်ခဲ့တာတွေဟာဘာအတွက်လဲ…. ဘာကြောင့်လဲ…ဒီကားက အတော်ကို ခေါင်းစားပါတယ်...နောက်ပြီးအဖော်အချွတ်အခန်းတစ်ချို့ ပါလို့ မိသားစုနဲ့အတူမကြည့်သင့်ပါဘူး..ဒီကားရဲ့ အဓိကသရုပ်ဆောင် Christian Bale ကိုတော့ ထွေထွေထူးထူးမိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုဘူးထင်ပါတယ် Review Credit - Channel Myanmar
IMDB: 7.6/10 423,649 votes